Himalaya Dainik » आज जेठ ३२ गते आइतबारको राशिफलः यी राशिलाई शुभ !
आज जेठ ३२ गते आइतबारको राशिफलः यी राशिलाई शुभ !
२०७७ साल जेठ-आषाढ कृष्णपक्ष ३२ गते आइतवार नवमी तिथी
घरायसी समस्या समाधान हुनेछ । दाजु,भाइ दिदि बैनी सँगको सम्वन्ध सुमधुर भएर जानेछ । दाजु भाइसँग मिलेर गरेको कामले गतिरोध लिनेछ । विद्यार्थीको लागि अध्यन क्षेत्र राम्रो देखिन्छ ।
व्यापार व्यावसायमा लगानि बढाई आम्दानिका स्रोतहरु पढाउँन सकिनेछ । काममा आएको वा’धा हटेर जानेछ । तर पनि नँया कामको लागि योजनाहरु बनाउदा राम्रो हुने देखिन्छ । विदेश यात्राको लागि राम्रो समय थियो तर अहिले लकडाउनले स’मस्या छ ।
नोकरिमा प्रतिष्पर्धिहरुलाई ह’राउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ भने सत्रुता राख्नेहरु आफै साईड लाग्नेछन् । स्वास्थ्यलाई लिएर केहि स-मस्या हुने देखिन्छ । भग्यमा आउदै गरेको वस्तु गु’म्नेछ । व्यापार वा जागिरमा आ’रोप प्रत्यारोप लाग्न सक्छ । अरुलाइ बिश्वास गर्नुपूर्व संयम्ता अपनाउनु होला ।
भौतिक बस्तुहरुको प्रयोग गर्न पाईनेछ । चो’टपटकको सम्भावना छ । लागेको रो’गको कारण हस्पीटल जानु पर्ने हुन सक्छ विचार गर्नुहोला । श्रीमान वा श्रीमतीको बोलीको कारण झ’गडा हुन सक्छ संयम्ता अपानाउनु होला ।
दाम्पत्य जीवनमा राम्रो हुने तथा मत मतान्तर कम भएर जानेछ । प्रेमिका सँग भने कुनै पुरानो कुराले स’मस्या दिलाउन सक्छ । पार्टनर सँग मिलेर गरेको काममा राम्रो फाइदा पुग्नेछ ।
न्यायिक निर्णय तथा कानुनि फैसलाहरु तपाईकै पक्षमा आउँनेछन् । स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ । घरपरिवारमा मांगलिक कार्यको सल्लाह हुनेछ । अविवाहितको लागि योे समयमा कुरा आउने वा प्रेमलाइ विवाहमा परिणत गर्न सल्लाको लागि राम्रो समय छ ।
अध्ययनमा अभिरुचि बढ्नेछ भने उल्लेख्य सफलता प्राप्त हुँनेछन् । सन्तानको सुख पाउने समय छ । विद्यार्थीको लागि राम्रो समय छ । इलक्ट्रीक काममा लfग्ने व्यत्तिको लागि राम्रो समय छ । सापटी लगेको पैसा फिर्ता आउने देखिन्छ ।
सामाजिक कामहरु समयमानै सम्पादन गर्न सकिने हुँदा मान सम्मानमा बृद्धि हुँनेछ । मन अशान्त हुनेछ । आमाको स्वास्थ्यमा सम’स्या देखिने छ । गाडि,वाइक बाट दुःख पाउन सकिन्छ । छाति वा घाटिको स’मस्या देखा पर्नसक्ने छ ।
बिदेशि धन सम्पति हात लाग्ने समय रहेकोछ भने बिदेशमा बसेर काम गर्नेहरुले मनग्गे रुपैया पैसा कमाउँन सक्नेछन् । घर परिवार सुखमय वातावरण बन्नेछ । पुरानो राथिभाइ सँगको कुराकानीले मनमा खुसि प्राप्त हुने तथा खान पिनमा विचार गर्नुहोला अन्यथा पेट सम्बन्धि स-मस्या आउन सक्छ ।
व्यापार व्यावसायमा लगानि गरि प्रशस्त आम्दानि गर्न सकिनेछ भने ईच्छित चाहनाहरु पुरा हुँने हुँनाले मन चङगा हुँनेछ । धन ह’निको समय छ । बोल्दा विचार गर्नुहोला अन्यथा झग’डा पर्ने छ । अचल सम्मतिको किनवेच हुन सक्छ ।स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ
आउँने अवसरलाई सहि रुपमा सदुपयोग गर्न सक्दा चाहेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । व्यत्तित्वको प्रभाव राम्रो हुने छ । नयाँ कामको थालनी हुन सक्छ । दाम्पत्य जीवन राम्रो हुने तथा स्वस्थ्य स-मस्याले पिरोली रहेको थियो भने कम भएर जानेछ ।
भाग्लेले साथ दिनेहुँदा सानो प्रयत्नले ठुलो काम बन्नेछ । धर्म तथा अध्यात्मतिर ध्यान जाने हुँनाले शरिरले सकारात्मक उर्जा ग्रहण गर्नेछ ।अनावस्यक दुःख पाउने योग छ । मनका धेरै कुरा खेल्नाले मन अशान्त हुनेछ । वहुमुल्य सामान हरा’उन सक्छ विचार गर्नुहोला ।